आज सोनिकाको इङ्गेजमेन्ट ! भन्छिन्, ‘साडी लगाएर तयार हुँदैछु’ – Hamrosandesh.com
आज सोनिकाको इङ्गेजमेन्ट ! भन्छिन्, ‘साडी लगाएर तयार हुँदैछु’
अनिल गुरुगंले सोनिकालाई फोन गरे । उनले आफु प्रहरी हुँ भन्दै सोनिकालाई फोन गर्दा उनले उनका विषयलाई लिएर गरिएको चर्चाका विषयलाई जोडेर उनले प्रश्न गरेका थिए । उनले आफुलाई प्रहरी भनेर सोनिकालाई फोन गरे । पूर्व युवराज पारस शाहको १२ लाख चोरी गरेको आरोप लगाउँदै एउटा मिडियाले समाचार बनाएपछि निकै चर्चा भएको थियो । अनिलले सोही विषयलाई लिएर प्राग्कं गरेका थिए । पूर्व युवराज पारसको १२ लाख लिएर गएको भन्ने विषयलाई लिएर उनले फोन मार्फत रमाइलो गर्ने कोशिष गरेका छन् ।
उनले म प्रहरी इन्सपेक्टर हरी वम्जन हुँ भन्दै फोन गरेका थिए । तर सोनिकाले केही वेरमा उनलाई चिनिन् । उनले त्यो नाम निकै रमाइलो लागेको र तपाई अनिल हो भन्दै भनेकी थिइन् । उनले यतिवेला आफु वझागंमा रहेको र आमावुवासंग समय विताइरहेको बताएकी छन् । उनले आफुसंग रेखापनि संगै रहेको बताएकी छन् । उनले आफुवारेमा त्यस्तो लेख्ने काम नपाउनेहरु हुन भनेकी छन् । उनले आफु म चोर्ने जस्तो देखिन्छु र रु आफु आत्मनिर्भर रहेको बताइन्, उनले आफ्नो छुट्टै विजनेश रहेको र युट्युव पनि चलाउने गरेको बताएकी छन् ।
मंले संसार देखिसकें, अनि मलाई १२ लाख चोरेको आरोप लगाउने, त्यती १२ लाख त मैले कपडामै उडाएको छु, उनले भनिन्, मानिसहरुले फसाउन खोजेपछि मान्छेले त्यसै पत्याउने पनि रहेछन् । एकै पटक १२ लाख पनि आउने रैछ त्यस्तो पनि पत्याउने रु उनले ब्यग्यं गर्दै भनिन् ।
उनले आफु अहिले सारी लगाएको बताउँदै आज आफ्नो एग्गेजमेन्ट पनि हुनसक्ने बताइन् । भतिजीको जन्मदिन पार्टीमा जान लागेकाले आफु साडीमा जान लागेको बताइन् । उनले त्यो पार्टीमा कोही पन पर्ने भेटिए एग्गेजमेन्ट हुनसक्ने बताइन् । उनले आफुले राम्रो आम्दानी गरिरहेको बताउँदै त्यस्तो सानो चोर्ने काम नगर्ने बताइन् । सोनिकाले चोरी भने यस्तरी चोर्छु कि त्यो पैसाले देश बनाउन पुगोस् । उनले आफ्नो लागि बुवाआमाले केटा खोजिसकेको पनि बताएकी छन् ।